Somaaliyeey halkeebaad ka socotaa ama usocotaa?:
Home Somali News Somaaliyeey halkeebaad ka socotaa ama usocotaa?:
Qoraaga Abdirahman Lido
Qormadaan waxaanu kusoo bandhigi doonaa qodobkan soosocdo:
kacdoonadii dalkasoo maray,maxaa kiciyay maxaasa laga kasbaday?
1-kacddoonkii AL- Imaam Axmed Gureey:
Waxa uu dhacay qarnigii 16 aad ee lasoo dhaafay sababtiisuna waxa ay ahayd:gumaad ay xabashidu ku haayeen dadyoowgii muslimka ahaa ee geeska afrigada bari. Kacdoonkaa waxa uu socday mudo 10 sano ah asgoo guud ahaan kala wareegay xabashida dhulkeedii oo ay caasimadoodii aksom ku jirto. Lakin dhamaadkii gacan ay xabashidu Bortaqiiska ka heshay aawgeed quluqulkii muslimiinta waalahakiyay kadib markii uu geeridyooday Imam axmed 1542kii.
2-kacdoonkii Sayid M.C.Xasan:waxaa sabab u ahaa arimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen:
Kacdoonkaa waxa uu socday mudo gaaarayso 22sano waxa uuna dagaal lagalay sadex awoodood oo kala ah:Ingiriiskam, talyaaniga iyo xabashida. Waxa ayna isga hor yimaadeen dhowr goobood ku waayoo gaaray ilaayo 36 goobood.
Lakin ugu dambeeyntii kacdonkaa waa lasoo afmeeray sayidkiina waa uu geeriyooday 1921.
Kacdoonkaa waxaa laga kasbaday:
4- kacdoonkii meleteriga 1969:waxaa sabab u ahaa:
Sidaa daraadeed waxaa lasaadaalin karaa ineey soomaalidu usocoto horuu mar weyn iyo ineey maalin uun geeska afrika dood la’aan hoggaamin doonto dhawaa iyo dheeraaba waayo dhaqaalaha aad arkayso oo ay afrika ku sameeysay , aqoonyahanadaan kasoo wax baranaayo yurub ,maraykanka iyo dalalka kale ee aduunka iyo dalka balaaran oo ay soomaalidu leedahay, isugeeynta wadartaa miyeey waxla’aan noqneeysaa?waloow aanu qadarta waxbadan u wakiilaneeynu oo aynu ayada ka warsugeeyno hadana waxaa hubaal ah in soomaaliya sida maaanta loo arkaa aysan sii ahaaan doonin 30sano ee soo soctaaa oo uuna ka dhici doono isbedel dhaqan dhaqaale iyo maamul hanaan wanaagsan culeeys kastaayi hajiree.